Apple jụrụ ndị mmepe ma ọ bụrụ na ha chọrọ WWDC22 na mmadụ ma ọ bụ na ọ bụghị | Esi m mac
Apple jụrụ ndị mmepe ma ọ bụrụ na ha chọrọ WWDC22 ihu na ihu ma ọ bụ
Toni Cortes | 13/06/2021 17:00 | ọtụtụ
Ọ bụ ọdịnala na na njedebe nke WWDC izu, Apple jidere a nnyocha afọ ojuju n’etiti ndị mmepe niile nọ ya. A ezi uche na-emekarị ihe "weghara" sensations na ya na-enyere aka nwere ụbọchị ndị a, ma si otú na-agbalị ka mma na-esote mbipụta.
Na nkenke banyere mbipụta na-esote, Apple emeela ajụjụ na ajụjụ a kwuru. Chọrọ ịma ihe ndị mmepe chọrọ: a WWDC22 mebere dị ka mbipụta abụọ a ikpeazụ a, ma ọ bụ laghachi na ihu na ihu dị ka emere tupu ọrịa ahụ. Ọ dị mma na eburu n'uche ndị bịara ya. Anyị ga-ahụ mkpebi ha mere na nke a.
N'ime nyocha afọ ojuju nke Apple na-eduzi ndị bịara izu WWDC, ụlọ ọrụ ahụ na-ajụ ndị mmepe ma ọ bụrụ na, mgbe afọ abụọ nke ọgbakọ ahụ mere na usoro dijitalụ, ha ga-emeghe iji gaa in-mmadu Conference na mbipụta ọzọ na-esote afọ.
N'ihi na oria ojooApple emeela Nzukọ Nzukọ Mmepe zuru ụwa ọnụ na usoro dijitalụ zuru ezu maka afọ abụọ gara aga. Mbipụta abụọ a, nke gụnyere ogbako a na-edekọ edekọ na Apple Park na ọtụtụ nnọkọ dị n'ịntanetị n'efu, amasịwo ọtụtụ n'ime ndị mmepe obodo.
WWDC22 mebere, ihu na ihu, ma ọ bụ agwakọta
N'adịghị ka WWDC ihu na ihu, usoro ịntanetị enyerela Apple aka iru millones nke ndị mmepe na ndị ọrụ gburugburu ụwa. Ugbu a, ka ọkụ ahụ malitere ịpụta na njedebe nke ọwara ahụ na-enwe obi ụtọ-19, Apple nwere ike na-eme atụmatụ ịlaghachi na nzukọ mmadụ na-esote afọ ma na-echekwa akụkụ ụfọdụ na usoro dijitalụ.
Otu n'ime ajụjụ ndị dịka akụkụ nke nyocha WWDC nke afọ a bụ: "Olee otu ị ga-esi gaa ogbako n'onwe gị mgbe ị gụsịrị ihe omume na ntanetị?"
Obi abụọ adịghị ya na Apple na-echeworị maka mbipụta WWDC22 na-esote, ọ ga-atụle ma ime ya ihu, ma ọ bụ gaa n'ihu na nke mebere dị ka mbipụta abụọ ikpeazụ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Apple jụrụ ndị mmepe ma ọ bụrụ na ha chọrọ WWDC22 ihu na ihu ma ọ bụ
Lee ndị ọzọ niile nke macOS Monterey Akwụkwọ ahụaja
LEE Oge izizi nke izizi dị